Horumarka Goobaha Guga laga bilaabo Maajo 13 - Nidaamka Baradhada
Sida laga soo xigtay xogta hawlgalka ee agro-warshadaha cufnaanta maareynta ee wakaaladaha xubnaha ee Xiriirka Ruushka, ilaa Bishii Meey 13, 2020, 18,3 milyan ha ama 15,2% dhulkii lagu beeray dalagyada hadhuudhka xilliga qaboobaha waxaa lagu quudin jiray 82,9 milyan hektar oo waddanka oo dhan ah (2019 - - 14 milyan oo ha).
Beerista xilliga gu'ga waxaa lagu fuliyay dhul ah 26,9 milyan oo hektar, ama 51,7% aagga saadaasha (sanadka 2019 - 25,7 milyan hektar).
Marka lagu daro Degmooyinka Federaalka ee Koonfurta, abuuridda gu'ga waxaa lagu fuliyay aag 4 milyan oo ha ah, ama 69,7% saadaasha (2019 - 4 milyan ha), Waqooyiga Caucasus Federal District - 1,4 milyan ha, ama 72,5% ee saadaasha (sanadka 2019 - 1,4 milyan hektar), oo ku taalo Bartamaha Dowlada dhexe - 7,1 milyan hektar, ama 74,9% saadaasha, degmada Volga Federal - 8,8 milyan hektar, ama 56,4% saadaasha, Degmooyinka federaaliga ah ee Waqooyi-galbeed - 144,5 kun ha ama 31,3% saadaasha, Degmooyinka Bariga Fog - 437 kun ha ama 18,5% saadaasha (sanadka 2019 - 404,9 kun ha), Degmooyinka Federalka Siberian - 3,8 milyan ha ama 31,3% pro Nozu (sanadka 2019 G. - 2,4 milyan hektar) oo ku yaal Degmooyinka Gobolka Ural - 1,3 milyan hektar ama 29,5% saadaasha (sanadka 2019 G. - 696,5 ha.).
Dalaggii guga ee dalka oo dhan waxaa lagu beeray dhul dhan 15,9 milyan hektar, ama 54,5% aagga la saadaaliyay (2019 - 14,7 milyan hektar).
Kuwaas oo kala ah, sarreenka guga ayaa lagu beeray dhul ah 5,1 milyan hektar, ama 42,2% aagga la saadaaliyay (sanadka 2019 - 3,9 milyan hektar), galleyda guga - 5,5 milyan hektar, ama 69,9% aagga la saadaaliyay, galley. hadhuudhka - 2,1 milyan hektar, ama 78,2% aagga la saadaaliyay (sanadka 2019 - 1,9 milyan hektar), bariis - 127,6 kun hektar, ama 64,6% aagga la saadaaliyay.
Xididdada sokorta (warshad) waxaa lagu beeray aag ah 889,3 kun ha, ama 94,1% aagga la saadaaliyay.
Flax flax dhaadheer ayaa lagu beeray aag 13,3 kun hektar ah ama 27,4% aagga la saadaaliyay.
Sunflower waxaa lagu beeray aag ah 5 milyan hektar, ama 62,2% aagga la saadaaliyay (2019 - 4,7 milyan hektar).
Kufsiga guga waxaa lagu beerayaa aag 580,8 kun oo ha, ama 44,9% aagga la saadaaliyay.
Soybean waxaa lagu beeray aag ah 874,5 kun oo ha ama 27,6% aagga la saadaaliyay.
Baradhadu ee shirkadaha ganacsiga iyo beeralleyda (beeralleyda) beero ayaa lagu beeray dhul ah 130,3 kun hektar, ama 42,2% aagga saadaasha (2019 - 119,1 kun hektar).
Khudaarta ganacsiga shirkadaha beeraha iyo beeralleyda (beeralleyda) beero waxaa lagu beeray aag ah 91,8 kun ha, ama 49,4% aagga saadaaliyay (sanadka 2019 - 66,9 kun ha).
Tags: beerto baradhada sanadka 2020abuurista khudraddashaqada guga
Baradhadu ee gobolka Sverdlovsk waxaa lagu beeray dhul dhan 13,6 kun oo hektar
Agraitors of Nizhny Novgorod Gobolka ayaa dhammaystiray beero dalagyada waaweyn
Dhulka ku yaal baradhada gobolka Novosibirsk waligiis isma badali doono